Isifuba Se-Asma Esibangelwa Ukungezwani Nezifo - Okuyizimbangela, Izimpawu Nokulashwa - i-GAAPP
Isifuba Sama-aleji: Izimbangela, Izimpawu Nalokho Okufanele Ukwenze
Ikhaya>Siyini Isifo Somoya?>Isifuba Sama-aleji: Izimbangela, Izimpawu Nalokho Okufanele Ukwenze
Isifuba Sama-aleji: Izimbangela, Izimpawu Nalokho Okufanele UkwenzeIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T12:32:53+01:00
Uma ukhathazekile ngesifuba somoya (i-asthma) esingezwani nezinto ezithile, uze endaweni efanele ukuthola ulwazi ngezimbangela, izimpawu nezindlela zokwelashwa. Uzothola nezeluleko zokuthi ungazilawula kanjani izinto ezibangela i-asthma ezibangelwa i-aleji ekhaya lakho nasempilweni yansuku zonke.
Ukungezwani komzimba kuyisici esivamile se-asthma. Ingxenye yabantu abadala abane-asthma, nezingane eziyisishiyagalombili kwabayishumi abanesimo, bane-asthma yokugula. Abantu abaningi abane-asthma yokungezwani komzimba nabo bane-hay fever, i-eczema noma i-allergies yokudla.
Siyini isifuba somoya i-aleji?
Asiqondi kahle izimbangela zesifuba somoya, kodwa siyazi ukuthi singasebenza emndenini.
Siyazi futhi ukuthi izimpawu ze-asthma zingasuswa yilokho esikubiza ngokuthi yizimbangela. Lezi yizinto ezithinta imvelo yakho, futhi kulapho kungena khona i-asthma yokugula.
Ingabe i-asthma ye-allergen iyefana ne-asthma?
Isifuba somoya sihlukile kumuntu ngamunye - ungaba nesisusa esisodwa, noma eziningi. Lezi zimbangela zingabandakanya isimo sezulu esibandayo, ukuzivocavoca, ukucindezeleka noma ukugula okufana nomkhuhlane noma umkhuhlane.
Uma une-asthma yokungezwani komzimba, kwesinye isikhathi ebizwa ngokuthi i-asthma ebangelwa ukungezwani komzimba, i-trigger ivezwa entweni ebizwa nge-allergen.
Uma une-allergies, amasosha akho omzimba enza iphutha i-allergen njengosongo okufanele lubhujiswe bese ludlulela ngokweqile. Lokhu kubangela ukuvuvukala nezimpawu zesifuba somoya.
Amanye ama-allergen avame kakhulu afaka:
Kubantu abambalwa, ukungezwani kokudla nakho kungadala izimpawu zesifuba somoya.
Izimpawu ezivamile ze-asthma yokugula yilezi:
Ukukhwehlela, ikakhulukazi ebusuku, lapho uzivocavoca umzimba noma lapho uhleka
Ukuzizwa uphelelwa umoya.
Isifuba somoya akuyona into ongazihlola ngayo kanti ukwelashwa kubalulekile, ngakho-ke uma kuvela lezi zimpawu zesifuba somoya, sicela ubonane nodokotela wakho. Abanye abantu bayahlangabezana i-asthma enamandla noma ukuhlaselwa kaningi, kanti kwabanye kungahle kwenzeke kaningi futhi kungabi nezinkinga. Kepha ayikho into efana ne-asthma 'emnene' - ihlala idinga ukuhlolwa kwezokwelapha.
Uma une-asthma yokugula, ungahle ube nezinye izimpawu ezingezona ze-asthma lapho uvezwa ku-allergen eyibangelayo. Amehlo akho angazizwa ebomvu futhi enobuhlungu. Ungaba nekhala eligijimayo noma eliminyene, uthimule, ulume noma uqubuke.
Ngokungezwani nokudla, ungathola ukulunywa noma ukuvuvukala umlomo, ubuhlungu besisu, isifo sohudo, isicanucanu noma ukuhlanza. Abanye abantu bazizwa benesiyezi noma bequlekile.
Ukusabela okweqile komzimba kubizwa i-anaphylaxis. Kuba nzima kakhulu ukuphefumula, futhi ungaba nokushaya kwenhliziyo okusheshayo, uzizwe ujuluka futhi uze ulahlekelwe ukwazi. Lesi yisimo esisongela impilo futhi usizo oluphuthumayo lwezokwelapha luyadingeka.
Ngeshwa, ayikho into efana nokwelashwa kwesifuba somoya. Kodwa-ke, izimpawu zingaphathwa ngemithi yokwelapha i-asthma esebenza kahle kakhulu.
Lapho usutholakale une-asthma, umhlengikazi noma udokotela wakho kufanele akusize udwebe uhlelo lokwenziwa yisifuba somoya. Lokhu kuchaza ukuthi imiphi imithi okufanele uyithathe nokuthi uyiphuze nini. Izokutshela nokuthi yini okufanele uyenze esimweni esiphuthumayo.
Kunezingxenye ezimbili eziyinhloko zokwelashwa kwesifuba somoya:
Umuthi wokuvimbela lokho kusiza ukunciphisa ukuvuvukala ngokuhamba kwesikhathi. Ukuthatha i-inhalr yakho yokuvimbela njengoba kunqunyiwe kuyisivikelo esihle kakhulu ekulweni nesifuba somoya, njengoba amaphaphu akho ezokwazi ukubhekana ne-allergen uma uhlangabezana nayo.
I-inhaler yokutakula noma ye-reliever izosetshenziswa lapho uhlangabezana nezimpawu zesifuba somoya. Kubalulekile ukugcina le inhaler nawe ngaso sonke isikhathi, ukuze ukwazi ukuyithatha ngokushesha lapho kudingeka.
Amanye ama-inhalers ahlanganisa umuthi wokuvimbela nowokudambisa izifo.
Abantu abane-asthma enamandla banganikezwa ukwelashwa ngemijovo ejwayelekile, amaphilisi, noma umshini we-nebuliser ohambisa umuthi enkungwini ehogelwayo. Uzothola imininingwane eminingi ku- khombisa ukwelashwa kwesifuba somoya.
Ukuphefumula umzimba, ikakhulukazi uma kugadwe udokotela oqeqeshiwe, kungakusiza futhi ukuphatha isimo sakho. Lezi zivivinyo zisetshenziswa eceleni kwemithi yesifuba somoya, hhayi esikhundleni.
Ukwelashwa kwe-asthma akuyona nje into eyodwa - kufanele umenyelwe ukubuyekezwa njalo kwesifuba somoya nomhlengikazi noma nodokotela wakho. Kuyithuba elihle lokukhuluma ngezimpawu nokwelashwa kwakho, futhi unqume ukuthi ngabe lukhona yini ushintsho oludingekayo.
Ungayelapha kanjani i-asthma egulisayo ekhaya
Isifuba somoya akuyona into ongazilungisa ngayo futhi ngaso sonke isikhathi idinga ukwelulekwa ngabezempilo. Ukuthatha ukwelashwa kwesifuba somoya njengoba kunqunyiwe kuyindlela yakho yokuqala yokuzivikela. Kodwa-ke, ukunciphisa ukuvezwa kwakho kwizifo ezibangela izimpawu zakho ze-asthma kungakusiza ukuthi ulawule kangcono izimpawu zakho.
Ukungezwani komzimba nesifuba
Abantu bakhuluma ngokungezwani nezinwele zezinja noma izinwele zekati, kepha imbangela yangempela idander. Lezi zikhumba zesikhumba ezivela esilwaneni sakho zingadala ukusabela okweqile. Amaprotheni asemchameni wesilwane sakho, indle, amathe noma izimpaphe nawo angakwenza lokhu.
Kunezinto ezimbalwa ongazama ukuzisiza:
Gcina isilwane sakho ngaphandle ngangokunokwenzeka, nangaphandle kwekamelo lakho lokulala
Cela omunye umuntu ukuthi ageze futhi alungise isilwane sakho
Uhlanze umbhede wesilwane sakho noma ikheji njalo, kanye nanoma iyiphi ifenisha ethambile abachitha isikhathi kuyo.
Uma ucabanga ukuthi une-allergies esilwaneni, cela udokotela wakho ukuthi aku-odole noma akuthumele kuhlolo lokungezwani komzimba ukuze uqiniseke. Uma uxabana, udokotela wakho noma umhlengikazi angafaka amathiphu okuphatha ohlelweni lwakho lwe-asthma.
Kunemininingwane eminingi ekuphatheni izimpawu, ukuhlola nasekunciphiseni ukuvezwa kwakho, ku- imininingwane yokungezwani komzimba nesilwane.
Isifuba somoya (i-asthma) esingezwani negciwane
Izibungu zothuli yizinambuzane ezincane ezitholakala emakhaya onke ezithanda ukuhlala nempahla ethambile, okhaphethi, amakhethini kanye no-bedding. Udoti wabo uyimbangela ejwayelekile yokungezwani komzimba nesifo somoya i-asthma.
Awukwazi ukuqeda izibungu zothuli, kepha ungakuthola kuwusizo uku:
Yiba nesitezi esiqinile esikhundleni sokhaphethi
Gcina amakamelo asakazwa kahle
Geza izingubo ku-60 degrees Celsius
Sebenzisa izembozo zothuli embhedeni.
Uma ingane yakho ingezwani nezibungu zothuli, ungafaka amathoyizi athambile efrijini ukubulala izibungu zothuli, bese uwageza.
Ubufakazi besayensi abuhambisani, ngakho-ke asikwazi ukusho ngokuqinisekile ukuthi izindlela zokugcina izindlu zingawenza kangakanani umehluko. Ezinye izindlela zithatha umzamo omkhulu futhi zingabiza, ngakho-ke ungabi nzima kuwe uma kungakusizi kangako njengoba ubulindele.
Isinambuzane esisodwa esilawulwa kahle amaphela: ubulongwe bazo bungadala nesifuba somoya esibuhlungu. Ungakugwema ukuwaheha ngokugcina ikhishi lakho lihlanzekile - ungavumeli izitsha ezingcolile noma ukudla okungamboziwe kungahlali isikhathi eside kakhulu. Uma unamaphela, zama ukuwaqeda ngokushesha okukhulu.
Isikhunta kanye ne-asthma yokugula
Isikhunta siwuhlobo lwefungus futhi sikhipha izinhlamvu ezingadala ukungezwani komzimba, kufaka phakathi i-asthma. Uma uhlangabezana nezimpawu zokungezwani komzimba nezinkathi ezithile zonyaka, ungazwela ekubunjweni.
Ngaphandle, isikhunta sithanda ukukhula kwizingodo ezibolile, amaqabunga, utshani nezinqwaba zomquba. Ngakho-ke kungumbono omuhle ukugqoka imaski yothuli lapho usika utshani noma wenza eminye imisebenzi yangaphandle lapho ungaphazamisa izinto zezitshalo.
Endlini, isikhunta sikhula kahle ezindaweni ezimanzi njengezindlu zangasese, emakhishini nasezinsizeni ezingaphansi komhlaba. Kufanele ugcine ikhaya lakho linomoya opholile, ulungise ukuvuza ngokushesha futhi ugcine amanzi akho.
Uma ucabanga ukuthi une-aleji esikhunjeni, khuluma nodokotela wakho, ongancoma ukuhlolwa kwalokhu.
Ukungezwani komzimba nesifo sempova (hay fever)
Impova evela ezihlahleni, otshanini noma kokhula ingadala izimpawu zokungezwani komzimba, kubandakanya nesifuba somoya. Uma uxabana nempova, buza udokotela wakho noma usokhemisi ukuthi kufanele yini uthathe amaphilisi e-antihistamine noma i-steroid nasal spray. Kuyasiza ukuqala ukuzithatha ngaphambi kwenkathi yempova.
Kunengqondo futhi ukugwema ukuvezwa kwakho kwimpova ngangokunokwenzeka. Uzothola amathiphu amaningi awusizo kanye nokwelashwa okwengeziwe esihlokweni sethu ku ukungezwani kwempova.